Politika · Aogositra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Aogositra, 2010
Jolay 2021 23 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Aogositra, 2010
Tonizia13 Aogositra 2010
Iràna11 Aogositra 2010
Kambodza: adihevitra momba ny raharaha Duch
Azia Atsinanana11 Aogositra 2010
Nahazo sazy 35 taona ny lehiben'ny fonja nampangaina ho nanome ny baiko hampijaly sy hamono ho faty ireo olona 14,000 nandritry ny fitondran'ny Khmer Rouge tany Kambojy . Ity no sazy fanamelohana voalohany taorian'ny nianjeran'ny fitondrana Khmer Rouge 30 taona lasa izay . Manao hetsika ireo mpitoraka bilaogy.
Eoropa Afovoany & Atsinanana07 Aogositra 2010
Mi-Tweet mikasika ny fitsapan-kevi-bahoaka any Kenya 2010
Afrika Mainty05 Aogositra 2010
Nanao fitsapan-kevi-bahoaka mikasika ny fanaganana lalàm-panorenana vaovao ireo Kenyana androany. Vao haingana androany dia nanome rohin'ireo vohikala miaraka amina fanavaozana mikasika ity hetsika ity androany. Ireo Kenyana mpampiasa twitter be atao amin'ny fandefasana ireo tweets mikasika ity fitsapan-kevi-bahoaka ity amin'ny fampiasana ireo tenifototra: #uchaguzi, #kenyadecides
Sina: Aftershock – tantara sa fanoharana ara-politika?
Azia Atsinanana04 Aogositra 2010
Lasa fady ny miresaka mikasika ny horohorontany tany Sichuan tamin'ny taona 2008 any amin'ny media mahazatra noho ilay fananganana sekoly tsy zarizary iray manafintohina sy ny fisamborana ilay sivily mpanadihady Tan Zhouren, naseho tamin'ny fahitalavitra lehibe ny horohorontany tany Tangshan tamin'ny 22 Jolay, enina andro talohan'ny faha 34 taonan'ilay loza...
Karaiba: Ho an'ny fahafahana
Karaiba03 Aogositra 2010
Omaly, 1 Aogositra, no nanamarika ny faha 172 taonan'ny Androm-panafahana tany amin'ireo tany Karibeana (Caribbean) maro miteny Anglisy, rehefa afaka tamin'ireo voanjo Britanika nanandevo azy ireo andevo Afrikana maro. Androany dia andro tsy fiasàna ho an'ireo firenena maro any amin'iny faritra iny ary mpitoraka blaogy vitsivitsy no manararaotra io fotoana...
Tselatra · Madagasikara01 Aogositra 2010